October 2014 - Page 2 of 53 - iftineducation.com
iftineducation.com – Booliiska magaalada Columbus, Ohio ee dalkaas Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu si xoog ah u kala ceyriyey haween Soomaaliyeed oo raajicis ugu jirey sidii ay u heli lahaayeen guryo kiro ah oo raqiis oo ay ku noolaadaan. Haweenkaan Soomaalida iyo dad kale oo tiro badan ayaa waxaa la sheegay inay soo xaadireen goob ku taal magaalada Columbus, Ohio…
iftineducation.com – Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga Dr. Abdirahman Dualeh Beileh ayaa muujiyay in dalkiisu u baahan yahay taageero caalami ah oo suuragelin kara in fursado shaqo loo abuuro kaluumeysatada iyo dadka xeebta degan si loo baabi’iyo jiritaanka falalka burcad badeednimo. Wasiir Dr. Abdirahman D. Beileh oo khudbad ka jeediyay Shirka la dagaalanka burcad badeeda oo Wasiiro , Madax iyo…
iftineducation.com – Wararka Ka imaanaya MagaaladaMarka Ee Xarunta Gobolka Shabbelaha Hoose Ayaa sheegayaan in maanta Qaraxyo Lagula Eegatay Ciidamada AMISOM. Qaraxa Koowaad waxaa uu Ka Dhacay Xaafada Sheikh Abroone Kaas oo Lala beegasaday Gaadiid Ay Saarnaayen Cidanka AMISOM iyadoona La Shegyo in Qasaare uu gaarsiiyay ciidamada amisom. Qaraxa Labaad isana Waxaa lala Eegatay Ciidan Gurmad u Ahaa Kuwa Xaafada Sheikh Abroone…
iftineducation.com – Guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna ku simaha Madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid Allaha u naxariistee taliyihii Ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Maxamed Xasan Ismaaciil oo goor dhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Ku simaha Madaxweynaha ayaa yiri “INAA LILAAHI WA INAA ILEEYHI RAAJICUUN, Hor iyo horaan anigoo ku hadlaya magaceyga, magaca…
iftineducation.com – Isticmaalka hilibka Eeyaha ayaa si weyn looga isticmaalaa wadamada Vietnam iyo China, wuxuuna noqday hilibka Eeyaha kan ugu qaalisan ee laga cuno maqaayadaha. Sababta ka danbeysa in hilibka Eeyga noqdo mid qaali ah ayaa lagu sheegay in uu wanaajiyo awooda ragganimo, ee ragga hoos u dhac uu ku yimaado galmadooda. Arintaasi ayaa keentay in xaafadaha iyo guryaha laga ugaarsado…
iftineducation.com – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa ka tacsiyeeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Allaah u naxariistee Taliyihii Ciidamadda Booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo si kadis ah galabta ugu geeriyooday magaalada Muqdisho. Isagoo ku hadlaya Magaciisa, kan Xuumadda iyo kan shacabka Soomaaliyeed ayuu Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed tacsi u diray qoyskii asxaabtii iyo…
iftineducation.com – Si loo helo marwo wanaagsan oo ku sifowda raaliyo haween waxa haboon in laga helo qodobadan hoos ku qoran oo ah astaamaha lagu garto haweenayda xilkaska ah ee ninkeeda awlaadeeda iyo gurigeedaba ku filan. 1-in qaadato awaamirta ilaahay iyo waajibaadka alle saaray, iyo daacada rasuulka scw. 2- in ayna ka bixin guriga ninkeeda oo aan u idmin. 3-in ay…
iftineducation.com – Maalmaha Malabku waa maalmaha loogu jecelyahay Xabuubka Raaxada Galmada Wajiyo isku cusub Indho isu xiisa qaba jir isku baahan, Maalmaha Malabka ama gabi ahaanba Bisha malabku waa Maalmo iftiin iyo Caadku ka beedhayo qofka Waa maalmo Nolosha iftiinkeedu kuso kordhayo Waana Maalmaha Ugu Qiimaha badan Nolosha Aduunka. Dumarka Ma Biya Baxaan,,Iyo Qaabka Looga Keeno? Bal inta aynu uguda galin…
iftineducation.com – Gogoldhaaf waxaa laga wadaa ninka ama naagta oo Alle xalaal ku arsaaqay xaaran sameeya, marka gogoldhaafku waa wax aad u xun oo bulshada dhib weyn u keenaya, waxaan rabnaa inaan soo koobno sababaha keeni kara gogoldhaafka 1-Alla ka cabsi la’aan 2- ninka iyo naagta aan isku kalsooneyn 3- lamaanayasha aan midba midka kale jacayl u haynin ama baahitirikarin 4-…